दक्षिण भारतीय स्टारहरु बलिउडमा आउन डराउँनुकाे रहस्य यस्ताे | Rochak
September 23, 2021 NepstokLeaveaComment on दक्षिण भारतीय स्टारहरु बलिउडमा आउन डराउँनुकाे रहस्य यस्ताे
बाहुबली’ सिनेमाले बलिउड र दक्षिण भारतीय सिनेमा उद्योगबीच रहँदै आएको दुरीलाई धेरै कम गर्‍यो। ‘बाहुबली’ पछि दक्षिण भारतीय सिनेमाको लोकप्रियता हिन्दी सिनेमाको दब्दबा रहेको उत्तर भारतमा बढ्यो ।
बलिउडका स्टारहरू पनि दक्षिण भारतीय सिनेमामा लगातार काम गरिरहेका छन्। पछिल्लो केहि वर्ष यता यो क्रम बाक्लिएको छ। अजय देवगन, आलिया भट्ट, विद्या वालन, अमिताभ बच्चन, विवेक ओवरोय, अक्षय कुमार जस्ता ठूला नाम यस सूचिमा सामेल भइसकेकाछन ।
हालै ‘साहो’बाट बाहुबली स्टार प्रभासले बलिउडमा डेब्यू गरे। उनको डेब्यू वक्सअफिसमा सुखद सावित भइरहेको छ। सिनेमाले बलिउडको मानक सय करोडको आँकडा रिलिजको सातामा ने पार गर्‍यो। हाल दोश्रो हप्तामा चलिरहेको सिनेमाले राम्रै पैसा कमाइ गरिरहेको छ ।
थुप्रै बलिउड सिनेमा निर्माता-निर्देशकले प्रस्ताव गर्दा पनि उनीहरू सिनेमामा काम गर्न हिच्किचाउने गर्छन् यसको जवाफ हालै रिलिज भएको ‘साहो’मा देखिन्छ ।
दक्षिण भारतीय सिनेमाका प्रशंसकहरू आफ्ना प्रिय दक्षिण भारतीय स्टारहरू पनि बलिउड आउन भन्ने चाहन्छन्। प्रशंसकमा यस्तो कामना भएपनि दक्षिणका ठूला स्टारहरू बलिउडमा काम गर्ने हिच्किचाउने गर्छन् ।
महेश बाबु, विजय देवकोडां, अल्लु अर्जुन, विक्रम, यश, राम चरण, अजिथ जस्ता स्टारहरूका प्रशंसक दक्षिण भारतमा मात्र सिमित छैनन्, भारतभर छन्। उनीहरू अभिनित सिनेमाका हिन्दी डब संस्करणले उत्तर भारतमा राम्रो दर्शक बटुल्ने गरेको छ।
तर यति हुँदाहुँदै पनि बलिउडका सिनेमामा उनीहरू किन देखिदैंनन्? यो प्रश्न धेरैमा छ। थुप्रै बलिउड सिनेमा निर्माता-निर्देशकले प्रस्ताव गर्दा पनि उनीहरू सिनेमामा काम गर्न हिच्किचाउने गर्छन् यसको जवाफ हालै रिलिज भएको ‘साहो’मा देखिन्छ।
क्षेत्रिय कलाकारका लागि सबैभन्दा ठूलो समस्या भाषा रहेको छ। रजनीकान्त, कमल हसन जस्ता स्टारहरू हिन्दी भाषामा पोख्त छन् तर अन्य कलाकारलाई भाषिक कठिनाइ हुने गरेको छ।
‘साहो’को हिन्दी डब प्रभास स्वयंले गरेका छन् । उनको कमजोरी सिनेमाको हिन्दी संवादमा स्पष्ट महशूस हुन्छ। यसका लागि उनलाई हालै ट्रोलको सिकारसमेत बनाइयो।
यो उदाहरणले दक्षिण भारतिय सिनेमाका स्टारका लागि भाषा एउटा अवरोध हो भन्ने आधार दिएको छ। किनकी यसले एउटा उद्योगमा स्थापित स्टारलाई अर्को उद्योगमा स्थापित हुन मुश्किल बनाउँछ।
हरेक धार्मिक कार्यमा चामलको अक्षता किन ? के छ चामलको शास्त्रीय महत्व ?